Ihostele yasePontu D'Nkontru-1 Dorm Bed - I-Airbnb
Ihostele yasePontu D'Nkontru-1 Dorm Bed
Igumbi elisetyenziswa nangabanye abantu e ihostela sinombuki zindwendwe onguTarrafal'S Meeting Point
UTarrafal'S Meeting Point unezimvo eziyi-153 zezinye iindawo.
Indawo entle embindini wobomi baseTarrafal. Indawo yokulala inebalcony apho unokubukela ubomi bentengiso bemihla ngemihla ukusuka phezulu. Ungafumana isidlo sasemini esinencasa kwindawo yokutyela yangaphandle engaphaya kwesitrato nge-escudos ezingama-200 kuphela kwipleyiti nganye. Yonke into ikude nje. Kuthatha kuphela malunga nemizuzu emi-5 ukufikelela kwiilwandle eziphambili. Ebusuku kule ndawo kuthe cwaka kwaye kukho ukhuseleko lweeyure ezingama-24 ecaleni komnyango.
Umbuki zindwendwe ngu- Tarrafal'S Meeting Point
Mna okanye abasebenzi bam baya kuba lapha ukuze bakwamkele. Ndiyakuthanda ukwazi iindwendwe zam kwaye ndinike iingcebiso ngezinto omawuzenze eTarrafal kodwa andinakuba ngumkhokeli wakho wobuqu okanye iqabane. Ihostele yindawo entle yokudibana nabanye abahambi ngakumbi xa sinabahambi bebodwa abahlala kwindawo yokulala. Ndilindele umntwana wam wokuqala ngo-Agasti kwaye ndiya kuthembela kubasebenzi bam rhoqo kunanini na ngaphambili kodwa ndihlala ndibhalela okanye ndifowunele ukuba kuyimfuneko.
Mna okanye abasebenzi bam baya kuba lapha ukuze bakwamkele. Ndiyakuthanda ukwazi iindwendwe zam kwaye ndinike iingcebiso ngezinto omawuzenze eTarrafal kodwa andinakuba ngumkhokeli…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- tarrafal